I-STAAD - dala iphakethe lokuklama elingabizi kakhulu elilungiselelwe ukumelana nengcindezi yesakhiwo - ENtshonalanga India - eGeofumadas
I-STAAD - idala iphakethe lokuklama elingabizi kakhulu elilungiselelwe ukumelana nengcindezi yesakhiwo - eNtshonalanga India
Agasti, 2019 Ubunginiyela, Innovations, Microstation-Bentley
Itholakala endaweni eyinhloko yeSarabhai, i-K10 Grand yindawo yokwakha amahhovisi echaza amazinga amasha ezikhala zezentengiselwano eVadodara, eGujarat, eNdiya. Le ndawo ithole ukwanda okusheshayo kwezakhiwo zentengiso ngenxa yokuthi isondele esikhumulweni sezindiza sendawo kanye nesiteshi sesitimela. I-K10 yaqasha Abacebisi be-VYOM njengabaxhumanisi ngokuhlelekile kule projekthi futhi yabathuma ukuba bakhe isakhiwo esizohlangana futhi sidlule kakhulu okulindelwe okuphezulu kakhulu kwebhizinisi le-Vadodara elite.
Le projekthi ye-INR 1.2 billion iqukethe isisekelo esingaphansi nesisekelo se-12, esinendawo ephelele yezinyawo zesikwele i-200,000. Iningi lezakhiwo ezikule ndawo zisetshenziselwa izinto ezixubile, ezinezikhala zehhovisi ngaphezu kwamanye amabhizinisi. Kodwa-ke, i-K10 ibifuna ukuletha okuthile okusha endaweni, ngakho-ke i-K10 Grand izosetshenziselwa amahhovisi kuphela. Lokhu kulungiswa kuzonciphisa ukuphazamiseka kwempilo yehhovisi kubahlali.
Nqoba izinkinga zokuqamba ukudala isikhala esingenakholamu
Ukuklama lesi sakhiwo esimangazayo, i-VYOM idinga ukunqoba izinselelo eziningi. Ngenxa yokuphakama nokwakhiwa kwangaphakathi kwesakhiwo, bekunezinkinga ngokuhlelwa kwesakhiwo inhlangano ebedinga ukubhekana naso. Ithimba lephrojekthi lalifuna ukudala ibhilidi elinemibhoshongo emithathu nesakhiwo esimaphakathi. Isakhiwo sikhombisa ukuphuma kwesitezi esingezansi eziyisithupha bese sincipha ngaphezu kwezitezi eziyisithupha eziphakeme. Ukuhlelwa kwamakholomu nezindonga zokusika kwakunzima ngenxa yalesi sakhiwo esiyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, umakhi kanye nonjiniyela begcizelela ukuthi kube nesikhala esingenamakholamu ehholo lokungena. I-nucleus ephakathi nendawo yayidinga ukufaka yonke imisebenzi yomphakathi, futhi kwakunzima ukuba nomklamo ongamelana nokuzamazama komhlaba ngenxa yokuthi ukwakheka kwalesi sakhiwo kwakudonsela amabutho alandelana kakhulu. Ekugcineni, isisekelo sesakhiwo sasiyisisekelo esihlanganisiwe nesama-raft, ngakho-ke kwakudingeka ukuhlola ngokucophelela ukwakheka ngaphambi kokuqalwa. Njengamanje esigabeni sokwakha, kulindeleke ukuthi isakhiwo sibe yingqophamlando yendawo.
Izakhiwo zokuxhuma zomklamo owonga ngaphezulu kwezomnotho
Lapho kuklanywa isakhiwo, icebo lokuqala laliwukwakha izakhiwo ezihlukene ezine: imibhoshongo emithathu nesakhiwo esiyisisekelo. Kodwa-ke, lapho i-VYOM iqala ukuhlaziya ukwakhiwa e-STAAD, ithimba lephrojekthi labona ukuthi lesi siphakamiso sokuqala sokuqamba sasingengokomnotho. Esikhundleni salokho, iqembu lisebenzise i-STAAD ukudala idizayini entsha futhi eyenziwe yaba ngcono. Ithimba leprojekthi linqume ukuxhuma zonke izakhiwo, longa imali nesikhathi. Bekuqakathekile ukuthi iqembu lenze lolutshintsho ngaphambi kwesigaba sokwakha.
Njengoba lo mklamo usendaweni, i-VYOM inqume ukuthi izoyibeka kuphi amakholomu okusekela okuyisakhiwo. Abakwa-STAAD bakhombise ithimba lephrojekthi ukuthi ukwakheka kwesakhiwo kuncipha kakhulu ukusuka esitezi sesishiyagalolunye kuya phezulu, okwenza amakholomu ejwayelekile aqondile akunakwenzeka ngoba azowela uhlelo lokwakha. Amakholomu esithende abengeke asebenze noma ngabe ngabe anciphise kakhulu uphahla futhi onakalise nezinhlelo zehhovisi. Esikhundleni salokho, i-VYOM iphakamise amakholomu aqondile ezitezi eziyisishiyagalolunye zokuqala kanye nezinsika ezihambisanayo ukusuka kwesishiyagalolunye kuya kufulo leshumi nambili. Leli cebo lizogcina izakhiwo uma nje lihlala ngaphakathi kwezidingo zekhodi ye-IS.
Kusetshenziswe kwemishayo nezinsika zokulinganisa ukungezwani
Okunye okwasiza i-VYOM ukudala isikhala esiyingqayizivele kwakuwukusetshenziswa kwemishayo yangemva kokuxinwa. Imishayo ayikwazanga ukujula kakhulu, ngoba umakhi wayefuna uphahla oluphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, icebo lalidinga ukuthi izindunduma zigijime ugongolo. Lemishayo, kanye nezinsika nezindonga zokusika, yayivimbela ukudonswa phansi kwesakhiwo, okuvumela isikhungo sobunzima nokuqina kube seduze. I-VYOM yahlela izinsika ukuze amandla okugcina aphumule ngokuphelele enkabeni yesakhiwo. Zonke izindonga zokusika, izindonga zokuphakamisa nezinsika zahlelwa ukuze zikwazi ukumelana ne-70% yamandla we-lateral. Ukuhlinzeka isikhala esingenamakholamu endaweni yokwamukela izivakashi, i-VYOM isebenzise imishayo kanye ne-cantilever slabs yezinyawo ze-20 kuzo zonke ezinye izakhiwo zesakhiwo.
Isebenzisa i-STAAD, i-VYOM yabona ukuthi isekhona indawo yamandla aphezulu esakhiweni. Le ndawo yenzeke esitezi sesishiyagalolunye ngenxa yokuhlukaniswa kwamakholamu okuhlukaniswa. Isitezi sesishiyagalolunye sithwala umthwalo omkhulu, ngakho-ke kwakudingeka ukulungisa umklamo. Lapho iqembu lephrojekthi selibonile lesi simo, amalungu eqembu akwazile ukuhambisa kude namandla kusuka ezinsikeni ezisesitezi sesishiyagalolunye ngokuqiniswa kanye nezintambo ezibekwe phezu kwemishayo efanayo.
Ilondolozwa isikhathi sokuqamba somsebenzi wekusasa
Ngokusebenzisa i-STAAD, i-VYOM iphothule lonke uhlelo lokwakha ngemidwebo ngenyanga. I-STAAD ilondoloze ithimba lephrojekthi isikhathi eside kusigaba sokuklama, esivumele cishe ukwakhiwa kwe-70 design iternations kuzo zombili izindlela zokwakheka nokwakhiwa kokugcina phakathi nenyanga. I-STAAD inciphise isikhathi esidingekayo ukuklama nokuhlaziya lezi zikhalazo. Uhlelo lokusebenza luphinde lwavumela lokhu kushintshwa nezinguquko zomklamo ukuze zinamathele kwikhodi ye-IS endaweni elula ukuyisebenzisa.
Idizayini yahlangabezana nazo zonke izidingo zomakhi nonjiniyela, njengoba ukwakhiwa sekuqhubeka manje. Isakhiwo esilindwe isikhathi eside sibonakala sifana nemodeli ye-3D, futhi izikhala zezentengiso ziwusizo ngaphandle kwezithiyo. Njengoba itholakala enkabeni yedolobha, i-K10 Grand izovumela abahlali ukuthi babe nakho konke abakudingayo eduzane, kubandakanya nezitolo, izibhedlela, nezitolo ezinkulu kanye nezindawo zokudlela. Isikhala sizofaka ithala elophahla lwophahla, izikhala zemihlangano ezabiwe, indawo yokuphumula, indawo yokuzivocavoca kanye nendawo yokudlela, ezowenza ube umsebenzi wesikhathi esizayo.
Iphrojekthi entsha ye-K10 Grand yakhethwa njengowokugcina unyaka we-2018 Year ohlelweni lwe-Ingqalasizinda imiklomelo esigabeni se "Structural Engineering".
Ukuthatha ifa kuqhubeke, kulo nyaka, lezi zinhlangano ezilandelayo zifinyelele ohlwini lwabazoqeda unyaka kuhlelo lwe Imiklomelo Yengqalasizinda ye-2019 esigabeni se- "Structural Engineering".
I-FG Consultoria Empresarial yenhloko-dolobha entsha yePatrimonium, eyenziwa i-100% ekwakhiweni kwesakhiwo i-BIM, iLagoa da Prata, iMinas Gerais, eBrazil
ISterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd. YeDhirubhai Ambani International Convention & Exhibition Center, eMumbai, Maharashtra, India
I-WSP yokuletha umklamo olungiselelwe kahle wesisekelo esiyinkimbinkimbi ngaphansi kwe-Admiralty Arch eyisithonjana, eLondon, e-UK
Thumela Previous«Langaphambilini Ungakhulisa kanjani izakhiwo ze-3D kuGoogle Earth
Post Next Azisekho izindawo eziyimpumputhe ezinemisebenzi kaMoseOkulandelayo »